Mayelana NATHI - Hebei Jiuhe Hengye Fastener Production Co, Ltd.
Hebei Jiuhe Hengye Fastener Ukukhiqiza Co, Ltd.
Hebei Jiuhe Hengye Fastener Ukukhiqiza Co, Ltd., etholakala Yongnian, Handan, Provincia Hebei. Imikhiqizo eyinhloko: amantongomane aphezulu, amantongomane anamandla agqinsiwe, amantongomane aphezulu wesakhiwo sensimbi, amantongomane akhethekile esakhiwo sensimbi, njll. Inkampani ibithuthukisa, ngaphezu kwalokho, iba ngcono, futhi manje thina imboni yethu inezinto ezisetshenziswayo ezisezingeni eliphakeme, okuyi isetshenziselwa ukwenza zonke izinhlobo zezihloko ezibandayo ezibunjiwe njengezici zamantongomane, isikulufa, amabhlokhi, i-hex bolte, i-flange Bolt, U Bolt, ifreyimu yamandla kagesi, njll .Inkampani inethimba elinolwazi ngobuchwepheshe kanye nemvelo enhle yehhovisi.
I-Hebei Jiuhe Hengye Fastener Ukukhiqiza Co, Ltd iqoqo locwaningo lwesayensi, ukukhiqiza, ukuphatha njengenye yamabhizinisi asezingeni elifanele. U-Jiuhe Hengye ubambelela njalo kwifilosofi yebhizinisi "yenkonzo ithuthukisa inani nekhwalithi ewina umhlaba", enza ngokungathi siko isiko lenkampani "lobuqotho, umthwalo wemfanelo, ukubambisana nokwabelana", futhi ulwela ukudala ikhwalithi ekhethekile ye "Jiuhe Hengye". Bambelela kukho konke kusuka endaweni yokubukwa kwamakhasimende, izidingo eziphuthumayo zamakhasimende, cabanga ngalokho okucatshangwe ngamakhasimende, banamathele kuphethini lokuwina lokuwina kwazo zombili izinhlangothi, futhi bakhe inani lamakhasimende.
Isikhathi eside, abakhiqizi beJiuhe Hengye banedumela eliphakeme embonini ye-fastener ngenxa yohlelo oluphelele lokuqinisekisa ikhwalithi, uhlelo lokuphatha oluqinile, ukukhiqiza okuqinile kanye nezindlela zokutholwa eziphambili kanye nezindlela zokuqinisekisa. Imikhiqizo ithengiswa kahle ezifundazweni ezingaphezu kuka-20 kanye nasezifundeni ezizimele eChina, futhi ithembeke kakhulu futhi isekelwa amakhasimende, futhi ithole ikhwalithi enhle.
Njengoba sinezinkampani eziningi ezidumile zaphesheya eziklama futhi zisenzele izinto, imikhiqizo yethu yathunyelwa kwezinye izindawo eHong Kong, South Korea, Japan, Australia, Britain, Europe nase-Middle East.